Fandrindrana ny fifamoivoizana :: Mifampitana tsara amin’ireo mpitarika sarety ny ekipan’ny Polisim-pirenena • AoRaha
Fandrindrana ny fifamoivoizana Mifampitana tsara amin’ireo mpitarika sarety ny ekipan’ny Polisim-pirenena
Tsy mikoso-maso manoloana ny di-dohan’ireo mpitarika posy sy sarety eto an-drenivohitra ireo ekipan’ny Polisim-pirenena, izay manaraka ny fampiharana ny lalàna amin’ny arabe sasany eto Iarivo. Tsy nitsitsy tamin’ny fanakanana ireo sarety sy posy nifamezivezy tamin’ny ora efa voarara tsy ifamoivoizan’izy ireo ny polisy. Velona mihitsy ny fifamaliana teo amin’ny roa tonta, teny amin’ny fihodinan-dalana 67 ha-Ambodin’Isotry iny, omaly. Mitohy hatrany anefa ny hetsiky ny Polisim-pirenena.
Mazava ny toromarika « efa nivoaka ny naoty momba ny fivezivezen’ireo sarety sy posy eto an-drenivohitra. Nisy ihany koa ny
fanentanana natao azy ireo fa tsy tonga dia niroso tamin’ ny fanasaziana. Tsy maintsy manajanona an’ireo mandika ny lalàna ny polisy satria efa nisy ny fampilazana ».
Miafina hatrany ao ambadiky ny maha asa fiveloman’izy ireo amin’ity sehatra tsy manara-dalàna sady manelingelina tanteraka ny fifamoivoizana amin’ny faritra maro ity ireo mpitarika sarety sy posy. Noho ny fahalefahan’ny fampiharana lalàna aza anefa dia mbola afaka nandeha ihany ireo sarety sy posy ireo rehefa tonga ny ora voafaritr’ilay naoty navoakan’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo. Omaly dia posy sy sarety miisa roapolo no nogiazana noho ny tsy fanarahan-dalana, araka ny tatitra navoakan’ny avy eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Hiditra amin’ny fanasaziana mafy kosa ny Polisim-pirenena raha mitohy ny gaborarak’ireto fitaovam-pitaterana tsy ara-dalàna ireto, raha ny fanamafisan’ny talen’ny kabinetra eo anivon’ny minisite­ran’ny Filaminam-bahoaka, ny kaomisera Ainanirina Albert Estel.
Isan’ny fepetra noraisina mba hampahomby ny hetsika fandrindrana ny fifamoivoizana ny fampitomboana isa ny polisy mandamina eny an-dalambe eto an-drenivohitra. Hanampy an’ireo efa am-perinasa ireo polisy mpianatra asa.
Fanodinkodinam-bola tamin’ny asam-panjakana Voaheloka hiasa an-terivozona mandritra ny folo taona Razaimamonjy Claudine
Baolina kitra – COSAFA U20 Hiverina hifandona amin’ny manasa-dalana ny Barea sy ny Bafana Bafana
Vokatry ny andro ratsy Tafakatra efatra ny isan’ireo olona matin’ilay rivo-doza « Belna »
Ahiahy herisetra ara-nofo Milaza ny hitory, ny sendika misy an’ilay rasazy voaolana
Vinavina tetiandro :: Mety hotanterahina amin’ny volana oktobra ny fifidianana Ben’ny tanàna
Fisorahana loza :: Novakiana tamin’ny dinamita ny vatobe teny Tsarafaritra
Savorovoro – Oniversite Fianarantsoa Niady, nifampitora-bato, sady nanimba zavatra ireo samy mpianatra
Antso vonjina mpanakanto Herintaona sy tapany niaretana fangirifiriana i Fanaiky (Solomiral)
Voina mampihoron-koditra Lehilahy tapa-doha sy taovam-pananahana